‘लखपति माग्ने’ मा को देखिदैछ माग्नेको भूमिकामा ? – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainment‘लखपति माग्ने’ मा को देखिदैछ माग्नेको भूमिकामा ?
नेपालकै पहिलो महिला सिनेमाटोग्राफर सवनम मुखीयाको निर्देशनमा निर्माण भैरहेको चलचित्र ‘लखपति माग्ने’ मा हाँस्य कलाकार कमलमणि नेपाल पनि अटाउने भएका छन् । हास्यटेलिसिरियल ‘भद्रगोल’ मा ‘के त भन्दाखेरि आखिरमा होन्त’ भन्ने थेगोले चर्चा कमाएका ‘खुपीका बा’ उर्फ कमलमणीले चलचित्रमा माग्नेको भूमिका निभाउने भएका हुन् । निर्देशक मुखीयाकै कथा रहेको चलचित्रको पचली भैरवबाट छायांकन सुरु गरिएको हो ।
प्रकाश चन्द्र महर्जन निर्माता रहेको चलचित्रको सह–निर्माता भने राजेश खड्गी रहेका छन् । ड्रिम वल्र्ड अफ फिल्म मेकर्स प्रा.लि.ले को व्यानरमा निर्माण निर्माण भैरहेको चलचित्रमा विष्णु अर्याल, सोनीका शाही, अपेशा खड्का, निरु खड्का, कुमार गजुरेल, मोहन राई, चन्द्र थापा, सुनील जंग रायमाझी, सविन कटुवाल लगायत कलाकारको प्रमुख भूमिका रहेको छ ।
शान्तिप्रिय, विशाल घोष र राजेश अर्यालको गीत रहेको उक्त फिल्ममा सन्तोष श्रेष्ठ, दीपक शर्मा, विशाल घोष र भुपु पाण्डेको संगीत छ ।
रामेश्वर हुमागाईको छायांकन रहने चलचिलाई काठमाडौं र धुलिखेलमा खिचिने भएको छ । ,तारा थापा ‘किम्भे’ ले चलचित्रको सम्पादन गर्ने भएका छन् ।